Ikhomishini yaseYurophu yamkele isiCwangciso seSetyhula sezoQoqo esitsha apho ibeka phambili ukunciphisa ukugcwala nokubeka inkunkuma, ukuqhuba kuyilo lokuphinda kubuye kuphindwe kubuyiswe kwaye kuncitshiswe nobunzima bezinto zokupakisha. Isicwangciso, esichongwa yiKhomishini njengenye yeebhlokhi ezinkulu zokwenziwa kweNdawo eYuhlaza yaseYurophu, sithathela ingqalelo iimfuno zeplasitiki zomxholo ohlaziyiweyo kunye namanyathelo okunciphisa inkunkuma kwiimveliso eziphambili ezinje ngokufakelwa, iidilesi ezongezwe ngabom microplastics, ziphuhlisa iilebheli kunye namanyathelo olawulo kwi ikhuphe i-microplastics ngaphandle ngabom kwaye iseka isiseko somgaqo-nkqubo wokusetyenziswa kweplastiki esekwe kwi-bio.
Isicwangciso se-EU seZazinzulu kuqoqosho lweSetyhula simisele intshukumo epheleleyo yamanyathelo aphendula kumngeni wokukhathazeka koluntu. Nangona kunjalo, njengoko ukusetyenziswa kweeplastikhi kulindeleke ukuba kuphindeke kabini kule minyaka ingama-20 izayo, iKomishini ichaze ukuba izakuthatha amanye amanyathelo ekujoliswe kuwo ukuze kuhlangatyezwane nemiceli mngeni efumaneka kwezi zinto ziqinisekileyo kwaye iyaqhubeka nokukhuthaza “indlela emanyanisiweyo” yokujongana nongcoliseko lweplastikhi. kwinqanaba lehlabathi.
“Uthintelo, ukunciphisa kunye nokusetyenziswa kwakhona, nangona bekuphezulu kwicandelo le-EU lokulahla inkunkuma, kuthathelwa ingqalelo ixesha elide. Siyayamkela into yokuba banikwe ngokufanelekileyo iinkonzo zoncedo zokutya, kodwa kufuneka babe sesona siseko sawo onke amanyathelo afanelekileyo okukhuthaza uhlengahlengiso lweplastikhi kunye nokupakisha, kunye neenkqubo zabo zemveliso kunye zokuhambisa. Lo ayisiyomeko kuphela yokufezekisa uqoqosho oluyinyani nolungenazityhefu, kukwayimfuneko ukuzisa i-ajenda yemozulu ye-EU, ”kuphawula uJustine Maillot, uMququzeleli woMgaqo-nkqubo weRethink Plastic Alliance.
I-Rethink Plastic Alliance iqukumbela ngesilumkiso sokuba, ukuba utyalomali lubhekiswe kulwakhiwo lwezixhobo zeplasitiki "zintsha" kunye nokurisayikilisha ikhemikhali, "oku kuya kwandisa ishishini njengesiqhelo kwixesha elizayo".